Idzo shiri Art sens - mazano eimba nebindu
06.01.2014 Yakatumirwa na: Art Sense
Chii chingave chakakwana chamangwanani kana chekudya kana uine zvakasiyana, zvigadzirwa zvinowirirana asi usina zano rekuzvishandira? Ehe, chingwa ndiyo mhinduro kumibvunzo mizhinji, uye mune ino nyaya chingwa chegorosi chinogona kuva mhinduro yakanaka. Pfungwa yakaburitswa ine musanganiswa wechingwa, mazai, wakapfungaurwa ham, mbatatisi salad, Cherry matomati, chizi, yakaomeswa hanyanisi, gariki, bhotela, coriander nyowani, inogona kutsiviwa nyore nyore neparsley.
Nzira yekugadzirira: Cheka marombo kubva pazvingwa uye ove mukati mukati nehupuni. Nemafuta akanyoroveswa, unozora mafuta mukati uye nekuravira. Gadzira zvinhu zvinoremerwa muhuwandu hwakasarudzika uye musanganiswa, uye isa munzvimbo yekutanga 200 degree oven. Zvichienderana nesitofu, unogona kubika pane fan kana ne foil, uye 10 maminetsi usati wapedza kusasa nechitema green, kutyora zai rimwe uye kubheka. Shumira uye kushamisika!
nekukurumidza mapiki, zvinonaka zvinonaka, mbatatisi saladi, ndiro dzemakeke, ndiro dzechingwa, ndiro dzechingwa, ndiro nendiro, ndiro nendiro nokuzadza, ndiro nezai, nyore nzira, shiri dzeeshiri, ndiro dzakakoshwa, makeke akasvinwa, chingwa chakarongedzwa, mapikicha, mukanyiwa zvokubikisa, zvingwa zvekubika, mazai ekubikisa, chizi, ham, mazai, mazai muzvingwa zvechingwa, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Yakashongedzwa piglet yemukanyiwa
Tinokupa iwe zano rinonakidza rekupfekera mukanyiwa unogona kutengwa wakagadzirira ...
Kukurumidza uye nyore chess keke
Mazhinji madhayeti anokurumidza, kana kuti zvimwe ayo anobva pane zvigadzirwa zvakapera, usatendera ...
Kukurumidza uye nyore Homemade bhanana ice cream
Ice cream ndeimwe yemadhayeti asingadzivisiki mumwedzi inopisa yezhizha. Zviri nyore ...
Nzira yekuziva sei kuti nyowani mazai?
Maitiro ekuziva pasina kukundikana kuti nyowani mazai ari imwe yemazano kuti nzwisiso ...
Isu tinopa pfungwa yekugadzirira kweyakagadzirwa mukaka svutugadzike, uyo kuravira kwayo haku ...
Pfungwa yepakutanga yekushongedza mazai eIsita
Maitiro aya anomiririra pfungwa nyowani nyore nyore yekushongedza mazai eIsita nekutamisa ...